Masar oo xaqiijisay inay xirtay suxufi ka tirsan Al Jasiira - BBC Somali
Masar oo xaqiijisay inay xirtay suxufi ka tirsan Al Jasiira
Lahaanshaha sawirka AL JAZEERA
Image caption Maxamuud Xuseen waa wariyaha la xiray
Masar ayaa xaqiijisay inay haynayso suxufi ka tirsan Al Jasiira oo Jimcihii la xiray.
Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in Maxamuud Xuseen uu sii xirnaan doono 15 maalmood, inta la baarayo kicin laga shakisan yahay inuu dadka kaga hor-keenayey xukuumadda iyo warar been abuur ah.
Al Jasiira oo laga mamnuucay inay ka hawl gasho Masar ayaa arrintaas cambaareysay.
Shabakaddan oo fadhigeedu yahay Qadar ayaa agaasimaheeda, Yasser Abu Hilalah, wuxuu sheegay in Mr Xuseen uu booqanayey dalka si uu fasax ula qaato qoyskiisa ee uusan shaqo u tegin. Wuxuu walaac ka muujiyey bedqabka Mr Xuseen.
Bishii Luulyo ayaa laba shaqaale oo ka tirsan Al Jasiira waxaa lagu xukumay dil ayagoo maqan, waxaana lagu eedeeyey inay sirta dalka u gudbiyeen Qadar.